သင့်မျက်လုံးလေးတွေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ? - Mr. Discount (Myanmar)
Home / News / သင့်မျက်လုံးလေးတွေကို ဘယ်လိုဂရုစိုက်မလဲ?
မျက်လုံးဟာ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးရဲ့ အရေးအကြီးဆုံး အစိတ်အပိုင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ချစ်သူခင်သူနဲ့ ကမ္ဘာအဝှမ်းက အဖြစ်အပျက်အပြောင်းအလဲများကို ကြည့်ရှု ခံစားဖို့ရာ မျက်လုံးကပဲ အဓိက တာဝန်ယူပေးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းပါ။မျက်လုံးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ရောဂါအချို့ဟာ အမြင်အာရုံကို ဆုံးရှုံးစေတဲ့အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီး တစ်ခုခု ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ပြောင်းလဲမှုမျိုး ခံစားနေရပြီးဆိုရင် မျက်စိဆရာဝန်၊မျက်စိဆေးခန်းတို့ကို သွားဖို့ မနှောင့်နှေးသင့်ပါဘူး။ ကျန်းမာတဲ့ အမြင်အာရုံကို ရဖို့ မျက်လုံးကို ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးဟာ အရေးကြီးသလို မျက်လုံးကျန်းမာရေးဟာလဲ မေ့ထားသင့်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။
အမြင်အာရုံကြည်လင်ဖို့နဲ့ မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် အောက်ပါ ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလေးတွေကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။
မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် အသီးအရွက်နှင့် ငါးများများစားပေးသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အဝါရောင်နှင့် အစိမ်းရောင်ရှိသော အသီး အနှံများ၊ အိုမီဂါ-၃ ကြွယ်ဝသော ဆယ်လမွန်၊ တူနာငါးတို့ကို စားပေးသင့်ပါသည်။
သင်ဝိတ်တက်လာခြင်းက ဆီးချိုဖြစ်ခြင်းကို အားပေးပြီး ဆီးချိုရောဂါဟာ မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့် ကိုလက်စတောများခြင်းတို့မှ ရှောင်ကြဉ်ပေးနိုင်ပြီး မျက်လုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပေးနိုင်ပါသည်။
နေရောင်ခြည်သည် မျက်လုံး နှင့် မျက်လုံးကြွက်သားများကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်သဖြင့် UV-A , UV-B 99~100% ပါသော နေကာမျက်မှန်များကို တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။
မျက်လုံးထိခိုက်နိုင်သော အားကစားလုပ်တဲ့အချိန် နှင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်လုပ်သူများ နှင့် အိမ်တွင်း အသေးစားပြင်ဆင်မှု လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်လျှင် မျက်လုံးကို
မထိခိုက်စေရန် အကာအကွယ် ဝတ်ဆင်၊ တပ်ဆင်သင့်ပါသည်။
ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ ထင်နိုင်ပေမယ့် မျက်လုံးရဲ့ nerve နာဗ်ကြောလေးတွေဟာ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးနိုင်ပြီး မျက်စိတိမ်စွဲသော ရောဂါများ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
အချို.မျက်စိရောဂါတွေဟာ အမွေရသလို လက်ဆင့်ကမ်းတတ်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ အဖိုး၊ အဖွား၊ မိဘနဲ့ မောင်နှမတွေမှာ မျက်လုံးနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ ရောဂါမျိုး ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မှာလဲ အဲ့လိုရောဂါမျိုးဖြစ်ဖို့ အလားအလာ အတော်များပါတယ်။
သင်အသက်ကြီးလာတာနှင့်အမျှ အမြင်အာရုံ နဲ့ မျက်လုံးရောဂါအချို.ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ မျက်လုံးထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ သတိမမူမိတဲ့ အမူအကျင့်တွေရှိခဲ့ရင် ယခုကတည်းက သတိထားသင့်ပါတယ်။
သင်ဟာ မျက်ကပ်မှန်တပ်တဲ့ သူဆိုရင် မတပ်ခင်နဲ့ မျက်ကပ်မှန် ပြန်မထုတ်ခင်မှာ သင့်လက်ဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက် မျက်ကပ်မှန်ကိုလဲ သန့်ရှင်းစွာ ထားသိုဖို့ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
သင်ဟာ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဖုန်း အသုံးများတတ်တဲ့သူဆိုရင် ပင်ပန်းနေတဲ့ မျက်လုံးလေးတွေအတွက် မျက်တောင်ခတ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ စိတ်ဝင်တစား အလုပ်လုပ်မိရင် မျက်တောင်ခတ်ဖို့တောင် မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ်။မျက်လုံးကျန်းမာရေးအတွက် ၂၀-၂၀-၂၀ ဆိုတဲ့ စည်းမျဥ်းကို လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ ကွန်ပျူတာ Screen၊ ဖုန်းScreen ကို မိနစ် ၂၀ ကြည့်ပြီးတိုင်းမှာ ကိုယ့်အရှေ.ပေ ၂၀ခန့်ကို စက္ကန့် ၂၀လောက် ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ပါလို့ ဆိုလိုပါတယ်။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ မှန်ကြောင်လေးတွေရှိခဲ့ရင် ဖုန်းအရမ်းသုံးတဲ့သူတွေ ရှိခဲ့ရင် ဒီပို့စ်လေးကို Like & Share လုပ်ပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော် Sharing is Caring <3
(medlineplus-gov မှ Article အား ဆီလျော်အောင်ဘာသာပြန်သည်)